अनुरोध प्रगतिशित युवा क्लवले १८ औ बार्षिक उत्सव शुरु – ebaglung.com
अनुरोध प्रगतिशित युवा क्लवले १८ औ बार्षिक उत्सव शुरु
२०७४ माघ २७, शनिबार २१:३०	Top News
कौरव खत्री, गुल्मी २०७४ माघ २७ । शिवरात्रीको अवसर पारेर अनुरोध प्रगतिशिल युवा क्लवले आफ्नो मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ अरेवा गुल्मीले आफ्नो १८ औ बार्षिक उत्सव आजदेखि सुरु भएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १का वडाअध्यक्ष पूर्ण बहादुर हितान मगरले पछिल्लो समयमा क्लवले समाजका निकै रचनात्मक कार्यको शुभारम्भ गरेर समाजमा नमुना कार्यको थालनी गदै अगाडी बढेको बताए ।
साथै वडाअध्यक्ष हितान मगरले क्लवले गरेरको कामको खुलेरै प्रशंसा गरे ।
सोही अबसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका जिल्ला कार्य समिति सदस्य कौरव खत्री, निस्ती बडीगाड सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष मोहन घिमिरे लगायतले शुभकामना मन्तव्य गरेका थिए ।
कार्यक्रमको आज पहिलो दिन माध्यमिक स्तरीय बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका छात्रा अस्मिता गिरी प्रथम,सरस्वति माध्यमिक विद्यालयका छात्रा निमकला थापा द्धितीय र जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका सोनिया घिमिरे तृतीय भएका छन् ।
विजेताहरुलाई नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो ।
साथै आज पहिलो दिन अन्तर्गत २४ समूहको सहभागिता रहेको भलिवल प्रतियोगिताको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि समाजसेवी कमल गिरीले भलिबल खेलको उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रम भोलि अर्थात २८ गते खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता तथा राष्ट्रिय कलाकारहरु मिक्सन खाती,नरेश खाती र हास्य कलाकार बालकृष्ण बराल गुल्मेली पाण्डे लगायत स्थानीय कलाकारहरुले विजोड प्रस्तुती रहने कार्यक्रम संयोजक शक्तिराज घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यक्रम क्लवका अध्यक्ष भूपेन्द्र रायमाझीको अध्यक्षता कोषाध्यक्ष देवा गिरीको स्वागत मन्तव्यसँगै शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन लालु गिरीले गरेका थिए ।
आफुले अक्षर चिनेको विद्यालयलाई पूर्व विद्याथीहरुव्दारा रु ७५ हजार आर्थिक सहयोग
बुर्तिबाङमा जेष्ठ नागरिक क्लबको बैठक सम्पन्न